စု​ေစာင္​း​ေရး — Steemit
အထူးသဖြင့်စျေးကွက်အတွက်အောင်မြင်သောချဉ်းကပ်၏အားသာချက်ယူသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကာကွယ်သူတို့ရဲ့အစုစုကိုနေရာချခြင်း, ဆွေမျိုးတန်ဖိုးဒေသများ exploit ဖို့ရှိမရှိ - - လှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဦးဆောင်ပွဲစားများနှင့်ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများအနေဖြင့်အချို့အတွေးအခေါ်များကိုတက်ဝိုင်းပါတယ်။ သစ္စစောင့်ခြင်း Fidelity ၏တွမ် Stevenson မှသူ 2017 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်ထက်ရှေ့ကိုရှာဖွေနေ '' ကိုပိုမိုသတိထား '' ဖြစ်ပြီး, '' 2018 ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်များတွင်အချို့သောပိုပြီးတည်ငြိမ်မှု '' ခန့်မှန်းထားသည်။ '' ကျနော်တို့ကလာမယ့် 12 လအတွင်းတဦးတည်းကိုမမွငျခဲ့ပါလျှင်ပင် 5% ဆွဲ-
2017 အနီးကပ်မှဆွဲယူအဖြစ်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွမ်းကျင်သူများကလာမယ့်နှစ်အတွက်စီးပွားရေးအလားအလာအကဲဖြတ်ရန်သူတို့ရဲ့ကြည်လင်ဘောလုံးသို့ကြည့်မျှော်နှင့်အကြိုးရှိနိုငျသောရန်ပုံငွေများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုးစားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာများနှင့်နှောင်ကြိုးစျေးကွက် '' တည်မြဲသောနွားထီးတကောင်ပြေးများနှင့်အများအပြားမန်နေဂျာမရှိအဆုံးရှိပုံရသည်နေစဉ် 2018 ဘို့
Andrew McHattie, ကဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်: 'ကျနော်တို့နေဆဲညှိနှိုင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကနေပိုပြီးတန်ဖိုးကိုထုတ်ယူ၏အလားအလာအပေါ်အပြုသဘောသော်လည်း, ငါတို့သည်လည်းသတိပေးအသံတစ်ခုကြီးထွားလာ hubbub သတိထားနေသောမန်နေဂျာ၏ပဒေသာမှဟောပြောလော့။ '' ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှုကမ္ဘာကြီးအကြားပုံနမူနာက Neil Woodford, 'ငါရေတွက်ဆုံးရှုံးသူဖြစ်ကြောင်းကိုအနီရောင်အလားအလာအပေါ်အပြုသဘောရှိနေဆဲ, စျေးကွက်ပူဖောင်းပိုင်နက်၌ရှိကြ၏အဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်အချိန်မှာအကုန်လုံးထိတ်လန့်ဘို့အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်အခြားဝေဖန်သုံးသပ်သူတို့တွင်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်းမရှိ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Trust မှသတင်းလွှာပြေးသူ
ရှိပါတယ်' 'လို့သတိပေးထားပါတယ်သူ Woodford လူနာ Capital ကိုကိုးစား၏မန်နေဂျာများပါဝင်သည်။ ဘုရားကျောင်းဘားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Trust ၏ Alastair Mundy ရရှိနိုင်အလုံအလောက်စျေးပေါထိတ်တပင်မျှမဖြစ်ကြောင်းကိုငြင်းခုံ, သဘောတူ။ '' ပဋိပက္ခဖြစ်နေသောအမြင်များသင်တန်း၏, စျေးကွက် function ကိုအဘယျသို့လုပ်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 2018 ဆောင်တတ်၏အဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်, 'McHattie ကထပ်ပြောသည်။
ကျောခြင်းမရှိဘဲတစ်နှစ်ပြီးနောက်ကျွန်မအံ့သြသွားလိမ့်မယ်, '' ဟုသူကပြောပါတယ်။ သူက '' စိတ်ဓါတ်များအတော်လေးစကားပြောတစ်ဆုတ်ယုတ်နိမ်မှာဖြစ်နေဆဲ '' ဘယ်မှာ, အမေရိကန်ကဦးဆောင်ပြီးအဓိကရှယ်ယာနွားကိုစျေးကွက်နောက်ကွယ်မှနေဆဲဖြစ်ကြောင်းဒေသများတွင်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေနေနှင့်ဥရောပနှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဒေသတန်ဖိုး-oriented Invest ထာဝရဥရောပ Equity ဝင်ငွေခွန်ရန်ပုံငွေထွက်ကောက်နေ, 'လှုပ်ရှားမှုအတွင်း
ဖြစ်ပွားနေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွေး-up, ကနေအကျိုးရှိမည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးရတနာသို' 'ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။ '' စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူထယူလိုက်တယ် အကယ်. ဖြစ်လျှင်ဤရန်ပုံငွေက၎င်း၏ယခုအချိန်တွင်ရှိနိုငျသညျ, '' ဟုသူကရှင်းပြသည်။ '' လိုက်နိုင်သည့်တစ်ဦး unconstrained ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေ - သူလည်းကောင်းစွာမယ့်အိမ်က-စိုက်ပျိုးရန်ပုံငွေ၏ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ဦးဘေးတိုက်-ရွေ့လျားစျေးကွက်, Fidelity ကို Global အထူးအခြေအနေများဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရာကိုအားသာချက်ယူ '' အခြားထွက်-and ထွက်စတော့ရှယ်ယာရွေးသူ '' အကြံပြု အခွင့်အလမ်းကမ္ဘာ့မန်နေဂျာသူတို့ကိုတွေ့လေရာရာ၌ '' ။ high-ပျံကို Tencent နှင့်အလီဘာဘာနည်းပညာစတော့ရှယ်ယာများ၏အကြိုက်ဖို့အပါအဝင်အာရှထိတွေ့ခြင်းသည် Stevenson ဟောငျးအပြန်အလှန်အာရှပစိဖိတ်ရွေးချယ်သည်။
'' လာမယ့်နှစ်ကထက်ပိုမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ဖွယ်ရှိစိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူ, ငါသည်ဤသော့ချက်ယာဉ်မောင်းများနှင့်စျေးကွက်စိတ်ဓါတ်များဆိုင်းအဖြစ်စတော့ရှယ်ယာနှင့်အကဏ္ဍများအကြားတစ်ဦးခေတ်ရဲ့သွက်လက်လမ်းအတွက်ရွှေ့ဖို့မန်နေဂျာရဲ့စွမ်းရည်အပေါ်ဟောငျးအပြန်အလှန်ရဲ့အာရုံစိုက်ကြိုက်တယ်။ '' FundCalibre FundCalibre ၏ဒါရိမင်းကြီး McDermott သူထွန်းသစ်စစျေးကွက်နှင့်အတူစတင် 2018 ခုနှစ်ရှင်သန်နိုင်ယုံကြည်နေကြောင်းအများအပြားဒေသများသတ်မှတ်။ '' ဒီနှစ်ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီးလျှင်နေသော်လည်း, ငါတို့ထွန်းသစ်စစျေးကွက်အတွင်းနေရာအများအပြားဆွဲဆောင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးစျေးကွက် counterparts တွေကိုအများအပြားမှဆွေမျိုးတန်ဖိုးထားကြသည်ယုံကြည်ပါတယ် '
' ဟုသူကရှင်းပြသည်။ မိမိအရွေးအဘယ်သူ၏မန်နေဂျာသူတစ်ဦး '' အထူးသဖြင့်အစွမ်း '' စတော့ရှယ်ယာရွေးသူစဉ်းစား Lazard & Emerging Markets ဖြစ်ပါသည်။ Stevenson မှလိုပဲ, McDermott ဥရောပအပေါ်အပြုသဘောဖြစ်ပါသည်: '' စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတိုးတက်စေူခင်း, နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ထိ မိ. လဲအလုပ်လက်မဲ့အဆင့်ဆင့်က M & ဒေသတွင်း၌တစ်ဦးကလှုပ်ရှားမှုဖွင့်ကောက်နေနှင့် IPOs စျေးကွက်လာရန်ဆက်လက်အတူဥရောပ၌စိတ်ဓါတ်များကျားကန်ပါပြီ။ သူကပြောပါတယ်, လက်ျာမန်နေဂျာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဖမ်းမိနိုင်သည့်တန်ဖိုးအိတ်ကပ်နေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ '' Marlborough ဥရောပ Multi-Cap ယင်း၏မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ပိုမိုသေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီအဝလွန်ထိတွေ့မှု၏မြေပြင်ပေါ်တွင်မိမိအရုပ်ဆိုးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ သူလည်းဗြိတိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူအတော်လေးမျက်နှာသာထဲကကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သောပေမယ့်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးသည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ဖော်ရွေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေများအတွက်အစွမ်းထက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှိရာဂျပန်, likes ။ Baillie Gifford ဂျပန်သည်မိမိရွေးဖြစ်ပါတယ်။ AJ ဘဲလ် ပွဲစား AJ ဘဲလ်မှာရိုင်ယန် Hughes ကျွန်တော်ပူဖောင်းပိုင်နက်သို့ရွေ့လျားစေခြင်းငှါစိုးရိမ်ပူပန်၏မျက်နှာ၌ကွဲပြားခြားနားသောစွန့်စားမှုစားချင်ကိုက်ညီဖို့ရန်ပုံငွေတစ်ရွေးချယ်ရေးရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းကြာပါတယ်။ '' စျေးကွက်၏ထိပ်တန်း Calling ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးနောက်ဆုံးတွင်ခန့်မှန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လက်ရှိ equity များအတွက်အလားအလာကျော်လေးသာမှုမှာဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအချို့ရှိသည်, '' ဟုသူကပြောပါတယ်။ သတိထား: ရှယ်ယာစျေးကွက်န်းကျင် All-အချိန်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြောင်းစံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပုံသေအကျိုးစီးပွားစျေးကွက် '' စိန်ခေါ် '' ပေါ်လာအား Hughes သတိထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် '' မြို့တော်ကာကွယ်အပေါ်အလွန်ရှင်းလင်းသောမျက်စိ '' နှင့်အတူ multi-ပိုင်ဆိုင်မှုဖြေရှင်းချက်အဖြစ် Troy Trojan အကြံပြုထားသည်။ ဟန်ချက်ညီ: ဒေသ၏စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူဆက်လက်အဖြစ် Hughes လည်းလိုလားသူဥရောပတပ်၌ရပ်တည်; သူ Crux ဥရောပအထူးအခြေအနေများရန်ပုံငွေကောင်းစွာအကျိုးခံစားရဖို့နေရာချနိုင်ယုံကြည်သည်။ ဒီအမြင့်မားသောခံယူချက်ရန်ပုံငွေပုံမှန်အားအဓိကအားဖြင့်အလယ်အလတ်နှင့်အသေးငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားတွင်, 'ခြွင်းချက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ဦးဆောင်အနေအထားရှိသည်သောကုမ္ပဏီများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်' '။ စွန့်စား: ဂျပန်စွန့်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့မိမိအရှေးခယျြမှုဖြစ်ပြီး, သူလည်း selec